दासत्व - टिमोथी डे फोम्बेले: “हरेक मानिस आफ्नो जीवनको साथ टाढा थियो! "- Jeune Afrique - TELES RELAY
दासत्व - टिमोथी डे फोम्बेले: “हरेक मानिस आफ्नो जीवनको साथ टाढा थियो! "- युवा अफ्रिका
By TELES RELAY On अगस्त 1, 2020
"Alma, le vent se lève" मा, फ्रान्सेली उपन्यासकारले दासत्वको इतिहासमा समर्पित त्रयीको पहिलो भाग प्रस्तुत गर्दछन्।
लेखक को लागी परिचित टोबी लोलनेससमकालीन संसारको पर्यावरणीय र काव्य दृष्टान्त टिमोथी डे फोम्बेले आफ्नो नयाँ ओपोसमा एक जवान ओकोको रोमांचकारी अनुसरण गर्छन् जसको परिवारको एक भागलाई दास व्यापारीहरूले अपहरण गरेका थिए, जोसेफ, जो फ्रान्सका एक फ्रान्सेली साहसी थिए। दास जहाज, र अन्य पात्रहरूको एक समूह को। शक्तिशाली वर्वको साथ त्रिकोणको पहिलो भाग, एक धनी दस्तावेज द्वारा समर्थित र हटाइएको रूपमा संवेदनशीलको रूपमा लेखन द्वारा समर्थित।
युवा अफ्रिका: अल्मा, तपाईंले भर्खरै सुरू गर्नुभएको गुलामीमा महान फ्रेस्को अफ्रिकामा बसाईएको थियो जब तपाईं किशोर हुनुहुन्थ्यो।
तिमोथी डी फोम्बेले: जब म करीव years बर्षको थिएँ, म मोरक्को, अगादीरमा एक बर्षको लागि बसें। मेरो बुबा एक वास्तुकार र शहर योजनाकार थियो, उहाँ शहरको मास्टर प्लानको जिम्मेवार हुनुहुन्थ्यो। यस अवधिले १ Paris औं मा पेरिसमा जन्मेको सानो फ्रान्सेलीलाई अनुमति दिए जुन म अन्य ठाउँमा संवेदनशील खोजी हुँ। पछि, १5वर्षको उमेरमा, म आइभरी कोस्टमा दुई वर्ष बस्छु, मेरा बुबा अबिजानको शहरी योजना कार्यशालामा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। जीन-मेर्मोज कलेजमा मैले धेरै व्यक्तिहरूसँग भेट गर्न सकें। यो आविष्कारको धेरै गहन क्षण थियो। हामीसँग विदेशमा साना फ्रान्सको पुनर्निर्माणको बारेमा कुनै विचार थिएन, र अबिजान माली र घानाको पैदल यात्राको लागि सुरूवात बिन्दु थियो। आज, जब मैले आफूलाई समयको आधारमा पत्ता लगाउनुपर्दछ, मैले महसुस गरें कि मेरो सबै मेमोरी यस क्षणको वरिपरि बनेको छ: कोटे डि आइवरको अघि र पछाडि छ।
के तपाईं त्यस समयमा परिवर्तन गर्नुभयो?
परिवर्तन uprooting सँग जोडिएको छ, जहाँ कतै, जुन म लेख्छु जुन व्याप्तिहरू हुन्। आफुलाई अबिड्जानमा भेट्न खोज्नु एउटा बदलाव हो जुन राम्रो लाग्दछ र मलाई जीवन भन्दा फरक जीवन पत्ता लगाउन अनुमति दिँदछ, जब म किशोरावस्थामा थिए। यसले मलाई परिवर्तन गर्यो। यस उमेरमा, हामी आफू वरपरका कुराहरूका लागि हामी धेरै संवेदनशील स्पन्जहरू हौं, र हाम्रा आमाबाबुले पनि हामीले भइरहेको कुराको तीव्रता महसुस गर्न सक्दैनौं। वयस्कको रूपमा, म छोड्न चाहान्छु। भियतनाममा, एक युवा शिक्षकको रूपमा, मैले महसुस गरें कि म एशियामा अफ्रिका खोजिरहेको छु!
त्यहाँ पुरूष र माटोको माटोको क्रस्टमा यी पुरुष र महिलाहरूको बाटोको कुनै चिह्न थिएन
यो आइवरी कोस्टबाट हो कि तपाईंले तटमा निर्माण गरिएका किल्लाहरू भेट्टाउनुभयो ...
सबै सन्तहरूको बिदाको दिनमा हामी घानाको लागि हाम्रो मज्दा स्टेशन गाडीमा प्रस्थान गर्यौं। मैले उल्लेख गरेको किल्लाहरूको सम्पूर्ण स्ट्रि visited हेर्‍यौं अल्मा: एल्मिना, केप कोस्ट, शमा। मेरो घाँटीमा मेरो क्यामेराको साथ, म समुद्रमा खस्ने यी सेता किल्लाहरूको पहिलो पुग्दा म के खोज्ने छु भनेर मलाई थाहा थिएन। यो एउटा डरलाग्दो आघात थियो। निस्सन्देह, मैले दासत्वको त्रासदीको बारेमा सुनेको छु, तर यो केही अमूर्त थियो। त्यहाँ एक गार्डले हामीलाई यो स्थानमा के भएको हो भनेर वर्णन गरे जहाँ हजारौं अफ्रिकीहरू - लाखौं समुद्री तटहरू एट्लान्टिक पार गर्न अघि सर्न थाले। किल्लाको तहखानेहरूको माटोको तहमा यी पुरुष र महिलाहरूको बाटो पत्ता लागेको थिएन। यो भारी थियो।
मा अल्मा, धेरै चरित्रहरू यस्तै प्रकारले वास्तविकता बारे सचेत हुन्छन्।
हो, यो रूपान्तरण मेरो व्यक्तिगत जागरूकता र विशेष गरी मैले आफ्ना पाठकहरु लाई लिन चाहानुभएको मार्गबाट ​​प्रेरित छ। हामी सिक्न सक्छौं कि धेरै मानिसहरुलाई अर्को महादेशमा पठाइएको थियो, तर तिनीहरू प्रत्येक आफ्नो ईतिहासको साथ व्यक्ति थिए। प्रत्येकको आफ्नो सम्पूर्ण जीवन संग टाढा थियो! मैले एल्मिनामा महसुस गरेको कुरा यही हो।
टिमोथी डे फोम्बेलेद्वारा प्रकाशित "अल्मा, ले वेंट से लोवे", ग्यालमेर्ड ज्युनेसे द्वारा जुन ११, २०२० मा प्रकाशित गरिएको थियो।
तपाईंले धेरै कागजात गर्नुभयो?
हो, म लेख्दा एक सर्वेक्षणको रूपमा गर्दछु। मेरो कागजात विविध छ। इतिहासका पुस्तकहरू छन् जुन अटलान्टिक दास व्यापारको बारेमा हामीले थाहा पाएका थियौं, जसलाई मार्कस रेडिकरले दासको जहाज, समुद्री समुद्री समुद्री किनारका सबै सर्वहारावर्गलाई सम्बोधन गरेको छ। उसको मार्क्सवादी दृष्टिकोण रहेको छ। सत्रौं शताब्दीको एट्लान्टिक र सबैभन्दा वंचितमा रुचि छ। मैले धेरै विशिष्ट अध्ययन पनि पढें, जसमा ला रोशेलको तस्करीमा एउटा पनि थियो। र, बीएनएफ [फ्रान्सको नेशनल लाइब्रेरी] को अनलाइन पुस्तकालय ग्यालिकालाई धन्यवाद छ, म कच्चा अभिलेखहरूमा पो रहेको थिएँ जुन जहाजका पुस्तकहरू थिए जसमा दास व्यापारीहरूले प्रशस्त मात्रामा प्रशंसा गरेका थिए जुन धेरै विचलित भइरहेको छ। ।
दास कथा धेरै दुर्लभ छन्
ओलाउदा इक्वियानो जस्ता स्लेभ कथाहरू, जुन माथिल्लो डेकबाट होल्डबाट पोइन्ट दृष्टिकोण प्रदान गर्दछ, धेरै दुर्लभ हुन्छन्। त्यहाँ न्यायिक स्रोतहरूबाट केही साक्षीहरू छन् जसले यात्रा र केहि दासहरूको क्रूस बताउँछन्, तर तिनीहरू एक हातका औंलाहरूमा गणना गर्न सकिन्छ, जब कि वृक्षारोपणको जीवनमा ती अनगिन्ती छन्। मैले पुरानो अफ्रिकामा पनि आफूलाई कागजातित गरें। हालसालैका वर्षहरूमा यस क्षेत्रको अनुसन्धान अझ गहिराइमा पुगेको छ, विशेष गरी फ्रान्सेइस-जेभियर फाउवेलले लेखेको पुस्तकलाई धन्यवाद। र त्यहाँ केहि बौलाहा मानिसका कामहरू पनि छन्, जस्तै जीन बौड्रियोट, जसले एउटा डु boat्गामा लेखेका थिए बिहान!
यो एक हो जसले तपाईंलाई प्रेरित गर्नुभयो मिठाई एमेली, जसमा अल्माले शुरू गर्दछ ...
हो, यो डु boat्गा दुई वर्ष अगाडि १ left1784 मा छोडियो मिठाई एमेली। मसँग यस जहाज र यसको फ्रेमको पचास वा xt० शटहरू छन् जुन मलाई यसको वरिपरि हिंड्न अनुमति दिन्छ। बिहान क्लासिक क्रसिंगको लागि रोशफर्ट, जहाँ यो बनाइएको थियो, छोडियो। उनी सेनेगल आइपुगे, त्यसपछि उनी तटको साथ समुद्री यात्रा गरेर क Kong्गोको राज्यतिर लागे। त्यसो भए, यो एट्लान्टिकलाई सान्तो डोमिन्गो तर्फ फैल्यो, त्यसपछि यसको महिमाको उचाईमा। चिनीको उत्पादनलाई अनुमति दिन त्यहाँ दासको व्यापार गहन थियो।
जब हामी यसलाई कल्पनाले संकलन गर्न सक्दछौं तब एक मेमोरी जीवित हुन शुरू हुन्छ
अल्मा ओको व्यक्तिको अन्तिम प्रतिनिधि हुन्। के यो व्यक्ति वास्तवमै अवस्थित थिए?
होईन, यो मेरो कल्पनाको अंश हो। मलाई यो स्वतन्त्रताको वास्तविक वास्तविक संसार चाहिएको थियो जुन मैले वर्णन गरेको बोसाको राज्य, नाइजर नदी, आशान्टिसको राज्यलाई जगाएर थियो। यस विषयमा साहित्यमा के पढिएको थियो भनेर पढ्दा मैले धेरै दुःख भोगें: युवा बन्धकहरूको विशिष्ट पथ ... शैलीमा "दासको रूपमा मेरो जीवन बाँच्नुहोस्" शैलीमा! जब हामी यसलाई कल्पनाले संकलन गर्न सक्दछौं तब एक मेमोरी जीवित हुन शुरू हुन्छ। उहाँलाई श्रद्धाञ्जलि दिन यो एकमात्र तरीका हो। त्यसैले मैले ओकोस सिर्जना गर्‍यो, जसले मलाई यस्तो मान्छेको विचारको साथ उत्कृष्टमा पुग्न अनुमति दिँदछ जो कम हुँदै गएकोले शक्ति र प्रतिभालाई केन्द्रित गर्दछ। यति धेरै कि तिनीहरूले लगभग महाशक्तिहरू प्राप्त गर्नेछन्।
यस नामको साथ त्यहाँ एक ओरिशा छ ...
यो व्यक्ति एक प्रकारको संश्लेषण हो, विभिन्न सभ्यताहरूबाट लिएको एलिमेन्ट्सको केहि क्युबिस्ट कोलाज। म उजाड शहरको कथा एकदम चाँडै पढें, कसैलाई किन थाहा छैन र किन हामीले धेरै भाँडाकुँडाहरू पायौं। यो यस प्रकारको रहस्यको फोल्डमा छ जुन मैले यो व्यक्तिहरू आविष्कार गरेको थियो। यो शब्द आफैंमा बनावटी हो, त्यहाँ एक ओयो मानिसहरू छन् ...
तपाईंको उपन्यासमा जादूको एक तत्व छ। यो प्राय: जसो महाद्वीपसँग सम्बन्धित छ?
म त्यहाँ केहि जादू भएको चाहन्थें - जब ऊ तल बस्छ, अल्माको भाईको मुनि बिरुवा बढ्छ - किनकि यस्तो किसिमको दृश्यले मलाई ट्रान्सपोर्ट गर्दछ। तर मैले स्पाइडर म्यान सुपर पावर प्रयोग गर्दिन, मैले यो जादूलाई अफ्रिकी परम्परा, गीत र विशेष गरी ग्रूट्समा आधारित गर्नुपर्दछ। अल्माकी आमा, जसले उनको गीत र उनको कथा सँगै जहाज राख्छिन्, मैले उनलाई आविष्कार गरिन। दासको जहाजमा, एउटी आइमाई राती गाउनै छोडिन्थ्यो किनभने जब उनी कमजोर भए, विद्रोह गर्जन भयो। यो यस्तो कथा हो जसले मलाई सोच्दछ कि म जे हुन्छ त्यसमा कहिल्यै बाँच्दिन।
यस टोममा, तपाइँ आफैंले अन्य अफ्रिकीहरूलाई कैद गरेको बताउनुहुन्छ।
सबै ईतिहासकारहरू यसको बारेमा कुरा गर्छन्। १ XNUMX औं शताब्दीमा त्यहाँ कुनै आक्रमण भएको थिएन किनभने पश्चिमीहरू डराएका थिए। उनीहरूले यो निकै खतरनाक कामलाई आउटसोर्स गर्न रुचाएका थिए जसको कारण उनीहरूले उनीहरूको आधारबाट टाढा सर्नुपर्दछ र जब उनीहरूले कुराकानी गर्न रुचाउँदछन्। मा अल्मा, म कसरी देखाउँछु कि यो व्यापार, यसको जहाजहरू र उनीहरूको अन्तर होल्डिंगले जसले मानवहरूलाई निल्छ, अफ्रिका पूर्ण रूपमा अव्यवस्थित र थकित छ। यो औद्योगीकरण युरोपेली अदालत र उपनगरहरूमा कफी र चिनीको लालसाका कारण भएको हो। म यस दिशालाई निर्देशित गर्ने हातको बारेमा गलत छैन। Vol०० पृष्ठहरूको तीन खण्डहरूसहित, म यो कथाको जटिलता देखाउन सक्छु।
तपाईंको पात्रहरू पनि जटिल छन्। र गहिरो मानव।
मेरो कच्चा माल मानव र मानव मा सार्वभौमिक हो। चाहे म एक यूरोपीयन वा अफ्रिकीलाई समर्थन गर्दछु, म यो ठीक ਉਸੇ तरीकाले गर्दछु। प्रत्येक चरित्रको एक हजार पक्षहरू छन्, र म कुनै खोट नदेखाउँदा खलनायक सिर्जना गर्न सक्दिन किनकि त्यसले उसलाई मतलब गरायो। म तिनीहरूलाई माफ गर्न कोशिश गरिरहेको छैन - मँ मेरो पोर्ट्रेट गैलरी मा केहि वास्तविक कचरा छ! -, तर तिनीहरू आफ्नो निधारमा "दुष्ट" चिन्ह संग आमाको गर्भबाट बाहिर आएन।
तपाईसँग अझै पनि राम्रो मान्छे र नराम्रो मान्छेहरू बीचको सम्बन्धको मार्क्सवादी दृष्टिकोण छ ...
यो ब्वाँसो र थुमाको विरोध गर्ने सबै अनन्त कालको कथाको क्लासिक दर्शन पनि हो। मसँग कहानीकारको राम्रो पुराना गल्तीहरू छन् जसले जीवनको अभावमा फ्याँकिएको सानो सानो चीजको साथ अन्धकार खलनायकको सामना गर्दछ। सम्बन्धमा यो ठाडो दृश्य जुन हामी फेला पार्दछौं टोबी लोलनेस जो मिचको साथ, ईस्टेट टाइकुनको प्रकार, यो जीवनको प्रतिबिम्ब हो।
इतिहासको यो क्षण आश्चर्यजनक छ किनकि यसले मानवताको एक भागलाई इन्कार गर्दछ
तस्करीको हिस्साको रूपमा मलाई खलनायकको चरित्र निर्माण गर्न कुनै कठिनाई भएन। इतिहासको यो क्षण आश्चर्यजनक छ किनकि यसले मानवताको एक भागलाई इन्कार गर्दछ। र सबैले यसबाट फाइदा उठाए। फ्रान्सको गहिराइबाट बेकरले डु b्गामा समेत आफ्नो बिस्कुट बेच्न सक्थे! युरोप यस्तै बनाइएको थियो!
अर्को दुई खण्डहरू कहाँ हुनेछ?
दोस्रो क्याप-फ्रान्सेइस शहरमा शुरू हुन्छ र सान्तो डोमिन्गोमा साथै लुइसियानामा रोप्न छेउमा लिन्छ। त्यहाँ एउटा युरोपेली भाग पनि छ, इ England्गल्यान्डमा उन्मूलनको शुरुआतको साथ, वास्तवमा अस्तित्वमा रहेको एक चरित्र, थोमा क्लार्कसन, एक जवान ब्रिटन जसले दासहरूको मुक्तिका लागि लड्न थाल्छ। र अल्मा फ्रान्सेली क्रान्ति अघिल्लो जाडोमा वर्साइलमा फेरि भेट हुनेछ। तेस्रो खण्डले सान्तो डोमिन्गोको ठूलो विद्रोहमा केन्द्रित हुनेछ। असफल यूरोपीयन उन्मूलन आन्दोलनको साथमा म मर्नरोनेजसँग व्यवहार गर्न चाहन्छु र त्यसबेला जब दासहरूले आफूलाई स्वतन्त्र पार्न खोज्छन्।
एक गिलास पानीमा विवादास्पद
टिमोथी डे फोम्बेले द्वारा "अल्मा" पुस्तकको प्लेट। O जोएल सागेट / एएफपी
एक सानो विवाद बहिर्गमनमा साहित्य समुदाय हलचलअल्मा। टिमोथी डे फोम्बेले, वाकर बुक्सका ए Anglo्ग्लो-स्याक्सन सम्पादकले वास्तवमा यसलाई सेतो लेखकको रूपमा सामना गर्नु परेको कालो बच्चाको कथा भन्नु उचित हुनेछैन भनेर बहानामा प्रकाशित नगर्ने निर्णय गरेको छ। गुलामी यो पहिलो पटक होइन कि यस किसिमका विचारहरुलाई बहसमा आमन्त्रित गरियो: एउटा समय यस्तो थियो जब यातना शिविरमा केही बाँचेकाहरूले आफ्नो कहानी कल्पनाको पुस्तकको विषय हुन अस्वीकार गरे। तर यो तर्कलाई सीमामा धकेल्नु भनेको सबै साहित्यहरूको लागि मृत्यु वारन्टमा हस्ताक्षर गर्नु हो। निश्चित भिक्टर ह्युगोले प्रस्तावनामा लेखेका थिए चिन्तन: “कहिलेकाँही म लेखकको बारेमा गुनासो गर्दछौं। हामीलाई भन्नुहोस्, हामी तिनीहरूसँग चिच्याउँछौं। हाय! जब म तपाईंसँग मेरो बारेमा कुरा गर्छु, म तपाईंको बारेमा कुरा गर्छु। तिमीलाई कस्तो लाग्दैन? आह! ए मूर्ख, जसले सोच्छ कि म तिमी होइनु! "
ग्रामीण महिलाहरु पलायनको बिरूद्ध दिगो कृषिमा भर पर्दछन् ...
सेनेगलमा स्वतन्त्र मिडियाका दिग्गज नेता बाबकार टूरलाई श्रद्धांजलि ...
बेल्जियम: "त्यहाँ आशा छ तर यसको मतलब यो होइन कि हामी ...
यो लेख पहिलो पल्ट देखा पर्यो युवा अफ्रिका
TELES RELAY 16777 पोस्ट 1 टिप्पणी
आईसीसीमा फतू बेनसौदाको उत्तराधिकार: उम्मेदवारहरू विश्वस्त पार्न संघर्ष गरिरहेका छन् - जेने अफ्रिक
बेनिनको लागि independence० वर्ष स्वतन्त्रता: कोविड १ of को कारणले सामान्य समारोह - जुने अफ्रिक
भारत: किन यी मुस्लिमहरूले राम मन्दिर निर्माणको लागि मनाइरहेका छन्